NAV - Quanzhou Omi Dharka Co., Ltd.
Dharka bamboo ayaa laga sameeyay fiilooyinka bamboo. Bamboo waxaa loo yaqaanaa qiyamka qaabdhismeedka alwaax; si kastaba ha noqotee, tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay waxay awood u yeelatay in ay alifiso shay cusub oo bamboo ka sameysan oo ah dunta / fiilooyinka. Baasaboorka bamboo laftiisa waa shey cusub laakiin warshadaha dunta waxay bilaabeen inay ku daraan qalab kale sida diyaarinta ballaaran ee dharka oo ay ku jiraan spandex. Bamboo waxaa marka hore lagu jajabiyaa qaybo yaryar ka hor inta enzyme-ka dabiiciga ahi uusan qudhmin oo uu dhuuqo biyaha oo uu dhaqo si uu ujebiyo dusha sare ee fiyuusta bamboo.
Suufka iyo funaanadda spandex ee bamboo ayaa laga sameeyay alaab dabiici ah iyo raaxo. Labaduba waa walxo dabiici ah sidaa darteed waxaa si weyn loogu talinayaa dharka isboortiga maaddaama ay neefsan karto oo maqaarka u fiican tahay. Khilaafku ma xanaajin doono maqaarka, dhab ahaantii, dhab ahaantii wuu dhuuqi doonaa dhididka oo si dhakhso leh ayuu u qalalayaa sidaa darteed wuxuu ku habboon yahay cayaartoyda iyo in ka badan. Sportek waxay leedahay qabanqaabin ballaaran oo suuf ah iyo funaanadda spandex bamboo waa meel ku habboon in laga helo naqshadda ugu habboon oo tayo sare leh.
Waa sifooyin dabiici ah oo hadana si heer sare ah u shaqeynaya ayaa ka dhigaya mid aad u qiimo badan, sidoo kale waa anti-bakteeriyada. Daraasadaha ayaa muujinaya in dharka bamboo ay leeyihiin heer cayiman oo anti-bakteeriya ah oo ka dhan ah cudurrada qaarkood sida Staphylococcus aureus iyo Escherichia coli. Markaa runti waxay maqaarka ka ilaalisaa deegaanno qalafsan. Waa lakab ku habboon waxqabadyada isboorti ee ka baxsan halkaas oo ay ku badan yihiin qorraxdu, biyo, iyo keymo. Kulan kasta oo lala yeesho lakabka funaanadda funaanada loo yaqaan 'spandex maaliyada' ayaa kaa ilaalin doonta infekshannada maqaarka ee ku dhaca deegaanka.